Mihemotra fa tsy mandroso : nihena 43% ny fandrosoan’i Madagasikara tato anatin’ny 54 taona | NewsMada
Mihemotra fa tsy mandroso : nihena 43% ny fandrosoan’i Madagasikara tato anatin’ny 54 taona
Tsy firenena an-dalam-pandrosoana i Madagasikara fa firenena tsy mitsahatra mihemotra. Tsy fantatra na fanahy iniana na fifanandrifiana fa mipoitra ny krizy rehefa mba miarina kely ny toekarena.
Araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena ny taona 2015, tsy mandroso i Madagasikara, raha nojerena araka ny tondro ara-toekarena amin’ny alalan’ny Vokatra anatiny ankapobeny na ilay antsoina hoe Harinkarena faobe na Produit intérieur brut (PIB). Hatramin’ny nahazoana ny Fahaleovantena ny taona 1960, nidina 43% ny PIB-n’i Madagasikara isam-batan’olona hatramin’ny taona 2014. Nahatratra 475 dolara ny PIB ny taona 1960, ary zara raha 271 dolara ny taona 2014.
Nambaran’ny Banky iraisam-pirenena fa ambony indrindra ny PIB-ntsika ny taona 1971 (501,16 dolara) ary ambany indrindra ny taona 2002 (249,1 dolara).
Tsy miditra amin’ny antony politika ny fanadihadiana fa manaitra kosa ny fisehony, ka tsy fantatra raha misy manao fanahy iniana mampiteraka korontana na koa fifanandrifiana fotsiny ihany. Tsy indray mandeha miseho anefa izany isaky ny misy krizy politika eto Madagasikara.
Tsy tafarina na efa niverina aza ny ara-dalàna
Mazava be ireo tarehimarika ireo. Vao tafakatra ambony ny PIB, midika fa misy ny fandrosoana, tonga ny rotaka 1972. Manamafy izany ny tamin’ny taona 2002, fotoana nisian’ny krizy politika naharitra enim-bolana. Tsy nijanona teo ny fitotonganana, fa niarina kely ny taona 2003 (265 dolara), 2004 (271 dolara),…., 2008 (302 dolara). Niaraha-nahita fa tonga indray ny krizy 2009 ka nivarina 282 dolara indray ilay fandrosoana kely.
Na efa nivalona aza ny krizy, tsy afaka nanarina ny toekarena ny mpitondra ara-dalàna, nanomboka ny taona 2014, fa vao mainka nitsontsorika hatrany amin’ny 271 dolara ny PIB.
Ankoatra ny fandrosoana araka ny PIB, firenena tsy mampazoto ny mpampiasa vola (Doing business) i Madagasikara (laharana 163 amin’ny firenena 189), firenena anjakan’ny kolikoly, manana naoty 28/100, ary any amin’ny laharana faha-123 amin’ny firenena 168.